Iyo Enigma yeKamuri 622: Joël Dicker's Yemazuva Ano Thriller | Zvazvino Zvinyorwa
Chirahwe chekamuri 622 ndiyo yekupedzisira novel nemunyori weSwitzerland Joël Dicker. Shanduro yayo yekutanga muchiFrench yakaburitswa munaKurume 2020. Mwedzi mitatu gare gare yakapihwa muchiSpanish, neshanduro naAmaya García Gallego naMaría Teresa Gallego Urrutia. Kufanana nemabasa ake apfuura, iri thriller.
Kunyangwe protagonist iine zita rakafanana nemunyori, haisi rondedzero yeupenyu. Nezve, Dicker anoti: “… pane chidimbu changu, asi ini handirondedzere hupenyu hwangu, ini handizvitaure ini.... ". Saizvozvowo, munyori akaita kuzvitsaurira kwakakosha munhoroondo: "Kumupepeti wangu, shamwari uye mudzidzisi, Bernard de Fallois (1926-2018). "Tinotenda vese vanyori pasi rose vanogona kusangana nemupepeti akasarudzika kudaro rimwe zuva."
1 Pfupiso yeChirahwe cheKamuri 622
1.1 Kutanga kwegore
1.2 Kusangana kunoshamisa
1.3 Rudo runopera
1.4 Zvese zvakapunzika
1.5 Rwendo kune alps
1.6 Muvakidzani munyori
1.7 Kutsvakurudza kufambira mberi
2 Kuongorora kweChirahwe cheKamuri 622
2.1 Yekutanga data rebasa
3.1 Joël Dicker mabhuku
Pfupiso ye Chirahwe chekamuri 622
MunaNdira 2018, Joël anoenda panguva yakaoma muhupenyu hwake: Bernard de Fallois, shamwari yake huru uye mupepeti, apfuura. Iye murume anga ave ari mumiriri mumufananidzo wejaya iri. Iye ane chikwereti kwaari kubudirira kwebasa rake semunyori, saka anosarudza kumukudza. Pakarepo, anotizira kuhofisi yake kuti anyore bhuku rakatsaurwa kuna chipangamazano wake Bernard.
Joël mumwe munyori ari oga; Muchokwadi, iye anongochengetedza kusangana kazhinji nemubatsiri wake akatendeka Denise. Ndiye iye anomukurudzira zuva nezuva kuti awane mhepo yakachena uye kurovedza muviri. Rimwe zuva paanodzoka kubva kumhanya iye asingatarisiri anorovera muSloane, muvakidzani wake mutsva. Kunyangwe ivo vakangochinjana mazwi mashoma, jaya racho rinotorwa nemukadzi anokwezva.
Kubva ipapo, Joël aifarira kuziva zvakawanda nezveSloaneAsi akange asina hushingi hwekumubvunza kunze. Humwe husiku hwaApril, nemukana chete, zvinowirirana mukopera konzati, vanotaura uye vapedza kuita vanoenda kunodya. Kubva ipapo, ivo vaviri vanorarama mwedzi miviri yeshungu dzakasimba dzinonyudza Jöel mune izvo zvaanoona kunge mufaro wakazara. Sekuwedzera, iye anova iyo musemu inomutendera kuti aenderere mberi nebhuku mukuremekedza Bernard.
Zvishoma nezvishoma Joël akatarisa zvakanyanya pakunyora pane kupedza nguva aine mudiwa wake. Kusangana kwacho kwaingova kwenguva pfupi, izvo zvakakonzera kutsemuka kwehukama hwaitaridzika kunge hwakakwana. Sloane akafunga kupedzisa zvese kuburikidza netsamba yaanosiya nemuchengeti wechivako. Idyll yaJoël inodonha mushure mekuverenga tsamba, saka akafunga kutiza pakarepo kubva panzvimbo iyoyo kutsvaga runyararo.
Rwendo kune alps
Ndiwo maitiro Joël anokwira kune yakakurumbira Palace hotera muVerbier muSwiss Alps. Paunosvika, chimwe chinhu chakasarudzika chinobata kutarisisa kwemunyori: iro kamuri iro Vakupa iwe kuti ugare iri 621 uye iyo inosangana inozivikanwa ne "621 bis". Kana vachikurukura, vanotsanangura kuti kuverenga kunokonzerwa nemhosva yakaparwa makore apfuura mukamuri 622, chiitiko chisati chagadziriswa.
Scarlett arikugarawo kuhotera, mudzidzi anodzidza uyo akaenda kunzvimbo iyoyo kuti abude pachena mushure mekurambana kwake. Ari mukamuri 621 bis, uye paakasangana naJoël akamubvunza kuti amurairise nedzimwe nzira dzake dzekunyora. Saizvozvowo, anomuudza nezvechisimba chakakomberedza nzvimbo yaanogara uye chinomukurudzira kuti aongorore nyaya iyi kuti aigadzirise.
Kutsvakurudza kufambira mberi
Sezvo kuferefeta kunoenderera, Joël anowana zvakakosha zvakakosha zvakakomberedza kuuraya. Munguva yechando ya2014 vatungamiriri vebhanga reSwitzerland Ebezner vaisangana pahotera kuti vagadze mutungamiri mutsva wesangano. Ivo vese vakagara kuVerbier kwehusiku hwemhemberero. Mangwanani akatevera acho akaonekwa akafa mumwe wevatungamiriri: muenzi mumba 622.
Vaviri vakashinga vanofumura boka rezvakavanzika zvinovatungamira kumhondi. Aya ndiwo maitiro ehunyanzvi, marongero, kutengesa, rudo mativi, huori uye mutambo wesimba wakakomberedza hutungamiriri hweSwitzerland kubhengi.
Analysis of Chirahwe chekamuri 622
Chirahwe chekamuri 622 Yakagadzirwa na Mapeji 624, yakakamurwa kuva 4 zvikamu zvikuru yakatanga mukati 74 zvitsauko. Nhoroondo ndeye akaverengwa mumunhu wekutanga newechitatu, uye izwi rinorondedzera rinotenderera pakati pevanhu vakasiyana siyana. Saizvozvo, pane akati wandei zano rinofamba kubva ikozvino (2018) kuenda kune yakapfuura (2002-2003); izvi kuitira kuti uzive ruzivo rwemhondi uye nevanhu vanobatanidzwa.
Mubhuku rino munyori akapa akasiyana mavara akagadzirwa zvakanaka anowonekera mune iyo nyaya. Pakati pavo, protagonists ayo anomira kunze:
Goverana nemunyori zvese zita rake uye basa rake semunyori. Akaenda kuAlps kuti azvichenese mushure mezviitiko zviviri zvinotyisa. Ikoko, nekuda kwemukadzi anokwezva uye anonakidza, anonyura mukuferefeta kwekuuraya. Chekupedzisira, anoona mhondi uye oburitsa huwori hukuru hwakakomberedza nyaya.
Ndicho asina ruzivo ruzivo kuti afunga kupedza mazuva mashoma akasiyana achityairwa neake achangoparadzana nemurume. Iye ari kugara mukamuri padyo naJoël Dicker, saka anotora mukana kudzidza hunyanzvi hwemunyori ane mukurumbira uyu. Iye Ichave yekubatsira kukuru mukuferefeta kuuraya kunoshamisa kwakaitika makore apfuura.
Joël dicker akaberekwa muna Chikumi 16, 1985 kuGeneva, Switzerland. Iye ndiye mwanakomana weGeneva mutengesi wemabhuku uye mudzidzisi wechiFrench. Kudzidziswa kwake kuchikoro kwaive kumusha kwake, kuCollège Madame de Staël. Mu 2004 -Usati wapinda yunivhesiti- akaenda kumitambo yekudzidzira muParis kwegore. Akadzokera kuGeneva, uye muna 2010 akawana dhigirii remutemo kubva kuUniversité de Genève.
Mumazuva ake ekutanga semunyori akararama anecdote inonakidza al kuregererwa kubva kumakwikwi evechidiki mabhuku. Dicker anga apa account yake Tiger (2005), asi yakarambwa nekuti vatongi vakafunga kuti haasi iye musiki webasa. Akazopihwa mubairo wepasi rose wevanyori vadiki vanotaura chiFrench uye chinyorwa chakaburitswa mune anthology nedzimwe nyaya dzinokunda.
Gore rimwe chetero akanyoresa kuPrx des Ecrivains Genevois (makwikwi emabhuku asina kunyorwa), neruzivo Mazuva ekupedzisira emadzibaba edu. Mushure mekukunda, akakwanisa kuitsikisa muna2012 sebasa rake rekutanga repamutemo. Kubva ipapo, iro basa remunyori rave kuwedzera. Parizvino inobata mazita mana ave bestsellers uye iyo iyo yakunda nayo vanopfuura mamirioni mapfumbamwe vaverengi.
Joël Dicker mabhuku
Mazuva ekupedzisira emadzibaba edu (2012)
Chakavanzika chemukamuri 622 (2020)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Chirahwe chekamuri 622